Caddeeyaha biyaha quraaradda: waxa ugu wanaagsan in la helo biyo cad oo dhalaalaya | Ee kalluunka
Caddeeyaha biyaha quraaradda ayaa kaalmo weyn u ah in biyuhu nadiif ahaadaan iyo iyada oo aan lahayn dareenka daruuraha oo aad u fool xun iyo dhibaatooyin caafimaad oo aad u badan ayaa sababi kara kalluunkeenna. Badeecadani waa dhakhso oo aad bay u sahlan tahay in la isticmaalo, in kasta oo ay leeyihiin tixgelinno badan oo la tixgelinayo.
Waayo, Maqaalkaan waxaan uga hadli doonnaa waxa uu yahay sharraxayaha biyaha quraaradda, marka lagu daro inaan kuu sheego sida ay u shaqeyso, sida loo isticmaalo ama inta ay qaadanayso in lagu shaqeeyo, oo lagu daray dhowr xeelado si biyahaagu nadiif ahaadaan. Sidaad ogtahay, biyuhu waa shey muhiim u ah aquariums -ka, sidaa darteed waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalladan kale ee ku saabsan qaboojiyaha biyaha quraaradda o waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka.
1 Waa maxay sharraxaadda biyaha quraaradda?
2 Sida ay u kala caddeeyaan u shaqeeyaan
3 Sida loo isticmaalo cadeeyaha
4 Muddo intee le'eg ayay qaadataa si ay u dhaqan gasho
5 Iibsashada iibsiga
5.1 Nooca quraaradda
5.2 Baahiyaha (u gaarka ah iyo quraaradda)
6 Sidee loo sameeyaa si loogu yeesho quraaradda biyo saafi ah? Xeelado
7 Miyaan ku isticmaali karaa cadeeyaha biyaha quraaradda quraaradda leh qoolley?
8 Cudurka cusub ee aquarium
9 Halkee laga iibsan karaa sharraxayaasha biyaha quraaradda raqiiska ah
Waa maxay sharraxaadda biyaha quraaradda?
Sifeeyaha biyaha ...
JBL Clearol - Daaweyn ...
JBL Biyaha Sifeeya ...
Caddeeyaha biyaha quraaradda waa dareere kaas oo aad ku baabi'in karto dareenka wasakhda ku dhex jira biyaha quraaraddaada oo baabi'inaya walxaha ku jira biyaha taasina waxay keentaa "daruur". Walxahaasi waxay biyaha u geli karaan sababo badan oo kala duwan, tusaale ahaan:
La quudinta, taas oo keeni karta cunto aan la cunin kalluunkaagu inuu ku milmo biyaha (xaaladdan biyuhu waxay u ekaan doonaan dhalada barafaysan).
El polvo taasi waxay sii daynaysaa quruuruxa.
ka badaha (Tani waxay noqon kartaa dhibaatada haddii quraaradu leedahay taabasho cagaar ah). Kuwani waxay bilaabi karaan inay ka koraan sababo badan oo kala duwan, sida iftiin aad u badan ama nafaqo badan.
Joogitaanka Macdanta ku milmay biyaha, sida fosfooraska ama birta, taas oo keeni doonta inay biyuhu u muuqdaan cawl ama bunni.
Wax kasta qurxinta kuwaas oo midabkoodu si tartiib tartiib ah u baaba'ayo.
Waxaa laga yaabaa xitaa in dareenkaas wasakhda ah uu sababay a nidaamka sifeynta dhibaatooyin (marka ay dhacdo, dabcan, waa inaad nadiifisaa biyaha oo aad hagaajisaa nidaamka shaandhaynta).
Sida ay u kala caddeeyaan u shaqeeyaan
Haddii ay dhacdo in biyaha ku jira quraaraddaadu ay u muuqdaan kuwo aan caddayn waa inaad qaaddaa tallaabooyin aad ku nadiifinayso ma aha oo kaliya sababo bilicsanaanta, laakiin sababta oo ah waxay khatar ku noqon kartaa kalluunkaaga. Sidaa darteed, mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ayaa ah in la isticmaalo caddeeyaha biyaha.
Qalliinku waa mid fudud, tan iyo waxa dareerahani sameeyo wuxuu keenaa falcelin kiimiko ah oo sii xoojisa walxaha keena in biyuhu u ekaadaan wasakh ilaa ay ka weynaadaan si ay u joogaan aquarium -ka hoose ama ay ku xanniban yihiin shaandhaynta. Habsocodku, intii suurtogal ah, aad buu u dhakhso badan yahay, maadaama ay qaadato kaliya dhowr saacadood si loo nadiifiyo biyaha.
Sida loo isticmaalo cadeeyaha
Waxaan ku xasuusinaynaa taas waa inaad had iyo jeer raacdaa tilmaamaha alaabta si aad uga fogaato cabsida oo aad u hesho natiijada ugu fiican. Summad kastaa waxay leedahay qiyaas u gaar ah, in kasta oo dhammaantood ay u shaqeeyaan si isku mid ah:
Hubi in aad algae iyo dhirta waa la daweeyaa iyo in badeecada aad isticmaalayso ay iyaga ammaan u tahay. Haddii aad doonayso inaad daaweyso, sug 24 saacadood ka hor intaadan isticmaalin caddaynta.
Hagaajinta PH ee biyaha 7,5.
Ku dheji qiyaasta badeecada halkii litir oo biyo ah ayaa la tilmaamay (badankoodu waxay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho daboolka mitirka oo aad tixgelisid litirrada biyaha iyo adkaanta tan qiyaasta). Haddii aad ku gudubto badda, waad dhaawici kartaa ama dili kartaa kalluunka xitaa waxaad biyaha ka dhigi kartaa wasakh.
Si taxaddar leh u shub alaabta biyo.
Ka tag shaandhaynta oo socota ilaa biyuhu u muuqdaan nadiif.
Badeecadaha qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad ku celiso qiyaasta ilaa biyuhu si buuxda nadiif u yihiin, in kastoo waa inaad hubisaa inay 48 saacadood dhaafeen inta u dhaxaysa qiyaasaha.
Muddo intee le'eg ayay qaadataa si ay u dhaqan gasho
Caadi ahaan cadeeyayaasha biyaha ayaa aad u dhakhso badan, in kasta oo ay ku xiran tahay badeecada. Caadi ahaan, a Celcelis ahaan 72 saac (taasi waa, saddex maalmood) si aad u hesho biyo cad oo nadiif ah.
Biyaha cadeeya waa a nooca wax soo saarka si caddaalad ah u gaar ah, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin tilmaamo badan oo ay tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso, maadaama ay jiraan moodooyin badan oo la heli karo. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fikirto waxyaabaha soo socda:
Caddeeyayaasha qaarkood waa kaliya ku habboon aquariums -ka biyaha macaan, halka kuwa kale si gaar ah loogu danleeyahay aquariums -ka la beeray ama biyaha cusbada leh. Sidoo kale, qaarkood kuma shaqeeyaan biyo aan la sifeynin, maadaama ay ka kooban yihiin isku -darka walxaha si loogu dhejiyo shaandhada. Sidaa darteed, iyada oo la tixgelinayo nooca quraaradda aan haysanno ayaa muhiim ah si aysan u jabin oo u rarin kalluunkeenna.
Xaqiiqdii, waxaa jira noocyo badan oo caddeeyayaal ah oo aan xitaa ka heli karno u jeedooyinka balliyada, xilliyo ...
Baahiyaha (u gaarka ah iyo quraaradda)
Sidoo kale, waa inaan eegnaa oo ka fikirnaa baahiyahayaga iyo, dabcan, kuwa quraaradda. Markaa, waxaan dooran karnaa badeecad si fudud u bixisa in la caddeeyo biyaha ama wax aad u dhammaystiran, maadaama ay jiraan qaar bixiya fursado badan oo dheeri ah, sida hagaajinta heerarka nafaqooyinka ama oksijiinta, taas oo noqon karta fikrad wanaagsan haddii aan u baahan tahay caawimaad dheeraad ah.
Sidoo kale, waxaa jira cadeeyayaal ka dheereeya kuwa kale, wax ay tahay inaad maanka ku hayso haddii aad doonayso inaad u isticmaasho hal mar, xaalad degdeg ah ama waqti ka waqti si aad biyaha nadiif u ahaato.
Sidoo kale, qiimuhu wuxuu saamayn doonaa waxaan raadinayno. Caddeeyayaasha fudud ayaa ka raqiisan, halka kuwa leh waxyaabo kale oo dheeri ah ay leeyihiin qiime sare. Fikrad wanaagsan ayaa laga yaabaa inay noqoto in la xisaabiyo waxa noo raqiisan intaanad wax iibsan.
Sidee loo sameeyaa si loogu yeesho quraaradda biyo saafi ah? Xeelado
Ku -haynta biyaha ku jira quraaradda -quraaradda oo nadiif ah oo dhalaalaya ma aha mid aad u adag, in kasta oo ay u baahan tahay taxane ah hawlaha soo noqnoqda ee ay tahay inaad mar walba fuliso, laakiin taasi waxay saamayn togan ku yeelan doontaa nolosha kalluunkaaga. Tusaale ahaan:
Quudi iyaga ku filan si looga hortago in cuntadu biyaha ku dhex dhacdo oo wasakh noqoto.
Nadiifi iyada oo shabag leh hadhaaga biyaha dhex sabbaysa marba marka ka dambaysa.
Ka saar quruuruxa mar walba si aaney boodhka u siideyn.
Hayso dad kalluun ku filan- Ha badin haddii kale quraaradu si dhakhso ah bay u wasakhaysaa.
Hayso quraaradda nadiifta ah.
Tag samee biyuhu si joogto ah ayay isu beddelaan (iyada oo la beddelo 10 illaa 15% biyaha toddobaad kasta, tusaale ahaan).
Hubso in nidaamka filter ayaa si fiican u shaqeeya oo nadiifi marka loo baahdo.
Miyaan ku isticmaali karaa cadeeyaha biyaha quraaradda quraaradda leh qoolley?
Maya, waligaa ha ku isticmaalin cadeeyaha quraaradda quraaradda leh qoolley. Alaabooyinkaan waxaa loogu talagalay kaliya kalluunka, kaasoo dhaawici kara noocyada kale.
Cudurka cusub ee aquarium
Xaaladda aad ku rakibtay aquarium cusub, Waxaa laga yaabaa inay biyuhu kala caddaan oo aad u malaynayso inay wasakh tahay. Si kastaba ha ahaatee, kiisaskan ayaa halkii ay ka ahayd in nidaamka deegaanka uu la jaanqaadayo xaaladdiisa cusub. Biyuhu waxay u muuqdaan kuwo aan caddayn sababtuna tahay noolaha microscopic -ka ah, sida bakteeriyada, oo ka timaada meelaha sida saxarka kalluunka, cuntada, ama dhirta. Caadi ahaan, marka bakteeriyadu degto, biyuhu waxay mar kale noqdaan kuwo dhalaalaya. Sidaa darteed, haddii aad leedahay aquarium cusub, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto usbuuc ka hor intaadan ku darin wax walxo kiimiko ah sida caddeeyayaasha biyaha.
Halkee laga iibsan karaa sharraxayaasha biyaha quraaradda raqiiska ah
Sharraxaadda biyaha aquarium -ka wanaagsan ma ahan wax aad u adag in la helo, inkastoo mararka qaarkood ku xiran halka aan aadno waxaan ka heli doonnaa moodooyin badan ama ka yar, tusaale ahaan:
En AmazonShaki la'aan, waa meesha aan ka heli doonno noocyada ugu badan ee moodooyinka, sidaa darteed haddii aan u baahanno wax aad u gaar ah, ama astaan ​​gaar ah, waa meesha ugu habboon ee marka hore la fiiriyo. Intaa waxaa dheer, waxay haystaan ​​wax walba, oo ay ku jiraan kuwa ugu fiican ama kuwa ugu caansan, sida Tetra, JBL, Flubal, Seachem ...
En dukaamada xayawaanka Sida Kiwoko iyo Zooplus ma heli doontid noocyo aad u badan, in kasta oo ay aad ugu habboon yihiin haddii lagu taliyo haddii aad taqaanid waxaad raadinayso ama haddii aad u baahan tahay xoogaa caawimaad ah, taas oo waxa ugu wanaagsan ee la -talinta ahi tahay inaad booqato mid ka mid ah dukaamadooda jirka , halkaas oo aad ka heli doonto caawimaad xirfadeed. Intaa waxaa dheer, websaydhadu waxay u muuqdaan inay leeyihiin barnaamijyo daacadnimo ah iyo dalabyo xiiso leh oo ku badbaadin kara mustaqbalka fog.
Halka ay ku jirto dukaanka waaxda DIY sida Leroy Merlin, oo ay ku taallo qayb yar oo loogu talagalay xayawaanka rabaayadda ah, ma heli doontid caddeyn ka badan kuwa loogu talagalay barkadaha dabbaasha ama balliyada oo aan noole nool.
Waxaan rajaynaynaa inaan kaa caawinnay inaad fahanto hawlgalka sharraxaadda biyaha quraaradda, badeecad aad u faa'iido badan labadaba si loo isticmaalo hab gaar ah iyo in biyuhu nadiif ahaadaan. biyo -biyo -biyoodkayaga, sidaas darteedna, ka dhig mid aad u qurux badan oo loogu raaxeysto kalluunkeenna. Noo sheeg, weligaa ma isticmaashay caddeeye? Sidee ahayd khibradaadu? Ma ku talinaysaa summad gaar ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Caddeeyaha biyaha quraaradda